साहसले संसार जितेका ५ अशक्त व्यक्तिहरु
सोमबार, ३० असोज, २०७४
समाजले अशक्त व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ । तर त्यो दृष्टिकोण फेर्न पनि यी व्यक्तिहरुले ठुलो भुमिका खेलेका छन् ।
आउनुहोस् हेरौ विश्वका केही चर्चीत व्यक्तिहरु जो अशक्त भएर पनि विश्व जित्न सफल भए ।
तीन वर्षको कलिलो उमेरदेखि भारतनाट्यम सिकेकी बलिउड एक्टर तथा डान्सरको जीवनमा ठुलो संकट तब आयो जब उनी बस दुर्घटनामा परिन् । उनलाई सामान्य चोट लागेको थियो तर समयमा चेकअप नगराउँदा उनको दाहिने खुट्टा काट्नु परेको थियो । उनको करिअरमा ठुलो धक्का लाग्यो । तर उनले हार मानिनन् । आर्टिफिसियल खुट्टा हालेर उनी एकपटक फेरी आफ्नो करिअर बनाउन लागि परिन् । घाइतेभएपछि उनले जब पहिलो पटक स्टेजमा परफरमेन्स दिइन् तब उनको उत्साहाको चौतर्फी तारिफ गरिएको थियो । उनलाई एक पत्रिकाले कोट गर्दै लेखेको थियो,‘एउटा खुट्टा गुमाइन् तर माइल हिडिन् ’
उनी भारतीय फिल्मीकी चर्चामा रहिरहने अभिनेत्रीमा गनिन्छिन् । उनले धेरै अवार्ड पनि प्राप्त गरेकी छिन् ।
२. शाम क्याथोर्न
उनले सन् २००९ मा ‘योङ अष्ट्रेलियन अफ द इयर’ अवार्ड जितेका थिए । उनको कार दुर्घटनामा भएको थियो । उनलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए । उनको मुटु तीन मिनेट तीस सेकेण्डसम्म रोकिएको थियो । उनको टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको थियो ।
उनको दाहिने खुट्टा र दाहिने हातमा पनि धेरै फ्याक्चरहरु भएको थियो । उनलाई डाक्टर अशक्त भएको र बाँकी जीवनमा ह्वीलचियरमा जीवन बिताउनु पर्ने बताएका थिए । उनको आत्मविश्वासका कारण उनी छिटो नै निको भए । त्यो घटनापछि पुर्ण ठिक भएपछि उनले भनेका थिए,‘तपाईले निर्णय लिनुहुन्छ त्यसले तपाई को हो भन्ने बुझाउँछ ।’
उनी विश्वमै त्यस्ता गिटारिष्ट हुन् जो कुहिनोका सहायताले गितार बजाउँछन् । विकसित राष्ट्रहरुमा उनको फाउण्डेसन ‘क्याथोर्न फाउण्डेसन’ विभिन्न कार्यक्रम गर्दै सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
३. राल्फ ब्राउन
राल्फ अमेरिकामा जन्मिएका हुन् । उनीको ह्वीलचियर बनाउने कम्पनी रहेको छ । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुमा उनको कम्पनी मार्फत ह्वीलचियर बेच्ने काम गर्छन् । ६ वर्षको उमेरमा मस्कुर डिसट्रोफी भएपछि उनले २० वर्षको मोटराइज स्कुटर निर्माण गरेका थिए ।
उनले त्यसपछि ब्राउन कर्पोरेशन फर्म खोलेका थिए । उनले आफ्नो सोचलाई फराकिलो पार्दै गए र सफलता हासिल गर्न सफल भए । सन् २०१२ मा अमेरिकन सरकारले उनलाई ‘च्याम्पियन अफ चेन्ज’ नाम दिइयो ।
४. अरुनिमा सिंहा
अरुनिमा विश्वकै यस्ती पहिला महिला हुन् जसले आर्टिफिसियल खुट्टाको भरमा सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन् । उनी राष्ट्रिय लेभल की भलिबल खेलाडी हुन् । रेलमा भएको दुर्घटनामा उनले आफ्नो खुट्टा गुमाउनु परेको थियो ।
उनको खुट्टको अप्रेशन गरी घुडामा रड राखिएको थियो । उनको यस घटनापछि मिडियामा ठुलो चर्चा भएको थियो । उनको मजाक तब उडाइयो जब उनले आर्टिफिसियल खुट्टाको भरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने निर्णय गरिन् । तर उनीले आफ्नो आत्मविश्वास प्रमाणित गरेरै छोडिन् । उनले सगरमाथा चढेर फर्केपछि एकपत्रिकालो उनलाई उदृत गर्दै भनेको थियो,‘असफलता त्यो होइन जब हामी आफुलाई कमजोर सम्झिन्छौ, उदेश्य कस्ता छन् तिनीहरुमा भर पर्ने कुरा हो ।’
५. क्रिस्टोफर रिभे
क्रिस्टोफर अमेरिकन डाक्टर, निर्देशक, फिल्ममेकर तथा एक्टिभिस्ट पनि हुन् । उनी अशक्त व्यक्तिहरुलाई उत्साह पैदा गर्ने एक उदाहरण पनि हुन् । उनी आफ्नो कमिक बुकका लागि पनि प्रख्यात रहेका छन् । उनको किताब ‘सुपर हिरो’, ‘सुपरम्यान’ । घोड सवारी गर्ने क्रममा लडेपछि उनीलाई प्यारालाइसिस भएको थियो ।
हिडडुल गर्न नसक्ने भएपछि उनी आत्महत्या गर्न समेत लागेका थिए । तर परिवारको सहयोगका कारण उनको नयाँ जीवन सुरु भयो । उनी उपचारका लागि इजरायल गए । त्यहाँ विभिन्न सुविधा लिदै उनको उपचार भयो । टाउकोमा गम्भिर चोट लागेका सयौ बिरामीसँग उनले छलफल गरे ।
अशक्त व्यक्तिहरुलाई उत्साहा प्रदान गर्ने काम गरेका उनलाई अमेरिकन प्यारालाइसिस एसोशियनसनमा अध्यक्षको रुपमा निर्वाचित गरिएको छ । स्पाइनल कर्ड घाइतेहरुको अध्ययनका लागि उनले रिभे–इर्भिन रिसर्च सेन्टर समेत स्थापना उनले गरे । यही विषयमा रहेर उनको रिसर्च सेन्टरले अध्ययन गर्दै आइरहेको छ ।